Weedhsan - Farriin ku socota Madaxweynaha la doortay – W/Q. Maxammad Saleebaan Cumar
Farriin ku socota Madaxweynaha la doortay – W/Q. Maxammad Saleebaan Cumar
Waxaynnu doorannay Madaxweyne cusub; Md. Muuse Biixi Cabdi. In ka badan kala badh bulshadii Somaliland ee codaysay ayaa dooratay. Doorashadiisa waxa ku baxay tacab
bulsheed oo xooggan. Aniga ayaa ugu yar oo safar boqollaal Kiiloomitir ah ayaan u galay si aan ugu codeeyo. Safarka intaa le’eg uma galin inaan wax gaar ah ku helo, waxaan se u galay inaan codkayga ku biiriyo isbeddal xaqiijiya sinnaan iyo horumar. Aniga iyo ummaddu ba, waxaannu filaynaa wax san. Waxaannu rejaynaynaa isbeddal horusocod ah.